युनियन लाईफको अर्को फड्को, बीमाशुल्कमा ८७ प्रतिशत वृद्धि, अन्य सूचांक कस्तो ? – Insurance Khabar
युनियन लाईफको अर्को फड्को, बीमाशुल्कमा ८७ प्रतिशत वृद्धि, अन्य सूचांक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७६, आईतवार १३:४६
काठमाडौं । यसअघि पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई उछिन्दै अघि बढेको युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रौमासमा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई कडा चुनौति दिन सफल भएको छ ।युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमाससम्ममा ८७ प्रतिशतले बीमाशुल्क आर्जनमा वृद्धि गर्न सफल भएको आइतबार सार्वजनिक भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले असोज मसान्तसम्ममा ७९ करोड ३१ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको थियो ।
त्यस्तै कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन रकम ९९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीले ३ करोड करोड ६७ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यद्यपि मुनाफा भने बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको क्रममा फेरबदल हुन सक्नेछ ।
कम्पनीको जगेडा कोषमा ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संचित भएको छ भने जीवन बीमा कोषमा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।असारमसान्तसम्म्मा कम्पनीले ५ हजार ८ सय ६४ वटा बीमालेख जारी गरेको छ भने १६ करोड ५१ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।